BEN’NY TANANA TIM : Liana amin’ny fampandrosoana imasoan’ny Fitondrana ankehitriny
Manomboka miseho masoandro ankehitriny fa misy amin’ireo ben’ny tanàna lany tamin’ny antoko Tim no tsy manaraka izay baiko avy amin’ny filoha mpanorina ny antoko nahalany azy intsony. 24 novembre 2020
Resy lahatra izy ireo fa ny fampandrosoana ny Firenena iombonana no tokony hokatsahaina.
Niady mafy mba tsy hahatanteraka ny fifidianana Loholona, izay hatao ny 11 desambra izao, ny teo anivon’ny Antoko Tim. Nanao fanambaràna ny tsy handray anjara amin’ny fifidianana izy ireo, ary nanao fanambaràna ihany koa fa tsy hampandray anjara an’ireo ben’ny tanàna sy mpanolotsaina lany tamin’ny anaran’ny antoko. Nolazaina tamin’izany fa handefasana taratasy mivantana isaky ny Kaominina ireo ben’ny tanàna ary hoesorina tsy ho isan’ny mpikambana ao anatin’ny Tim izay tsy manaraka izany.
Hatreto aloha tsy fantatra fa na tena nisy io trangan-javatra io na tsia fa Solombavambahoaka Tim no nanao fanambaràna izany. Na izany aza anefa misy amin’ireo ben’ny tanàna lany tamin’ny anaran’ny antoko Tim no tsy matahotra ny hivadi-belirano mba ho tombontsoan’ny Firenena amin’ny alalan’ny fikatsahana fampandrosoana marina eo anivon’ny Kaominina misy azy.
Misy amin’izy ireo no mahatsapa ankehitriny fa vahaolana ilain’ny Firenena ny fampandrosoana izay imasoan’ny Fitondram-panjakana ankehitriny. Manoloana izany, na tsy mankasitraka ny hanaovana fifidianana Loholona aza ny antoko Tim dia misy amin’ireo ben’ny tanàna Tim no maneho fahavononana feno handray anjara amin’ny latsa-bato ary mbola manohana ireo Kandida natolotry ny lisitra Isika Rehetra miaraka amin’ny Filoha Andry Rajoelina ihany koa. Misy ny hetsik’ireo olom-boafidy eny ifotony, izay ivondronan’ireo Ben’ny tanàna sy mpanolotsaina ho an’ny eto amin’ny Faritra Analamanga. Anisany mpikambana mavitrika amin’izany ireo Ben’ny tanàna Tim izay sahy miseho masoandro fa liana sy mankasitraka amin’ny asa fampandrosoana izay katsahin’ny Fitondram-panjakana.
« Vonona hanatanteraka ny adidinay izahay ary hifidy ny Loholona, ny zoma faha-11 desambra 2020 ho avy izao. Mitandro toy ny anakandriamaso ny fihavanana izahay ka hanaja ny safidin’ny tsirairay. Mikatsaka hatrany ny fiombonana sy ny fampandrosoana eo amin’ny Kaominina misy anay tsirairay avy, ka noho izany dia miantso ireo vondron-kery tsy ankanavaka eto amin’ny Firenena izahay mba hifanome tanana ho fampandrosoana an’i Madagasikara. Etoana ihany koa izahay dia manao antso avo antsika mpifidy vaventy namana, na mpanolotsaina io na Ben’ny tanàna na lany tamin’ny antoko izy na lany tamin’ny tsy miankina ary na mpanohitra na mpanohana ny Fitondrana mba ho tonga hanatevina an’izao hetsika hataonay izao ka hiray hina ho fampandrosoana an’i Madagasikara.
Andao hamita ny adidy izay nomen’ny Lalàm-panorenana antsika isika, ary andao hifidy ny lisitra Miaraka amin’ny Filoha Andry Rajoelina », araka ny fanambaràna niarahan’ireo mpikambana nanaiky. Diso kajy tanteraka ireo parlemantera Tim izay mikasa ny hampiasa an’ireo Ben’ny tanàna mba ho sakana amin’ny fiatrehana ny fifidianana Loholona. Midika izany fa lefy hery tanteraka ity antoko mpanohitra ity.